Aadan Barre oo sheegay danta KENYA ee Jubaland - News - Wararka - Somali Forum - Somalia Online
Aadan Barre oo sheegay danta KENYA ee Jubaland
By Deeq A., October 12, 2019 in News - Wararka
Kismaayo (Caasimada Online) – Xildhibaan Aadan barre Ducaale oo ka mid ah Xildhibaanada ka socda dowladda Kenya ee ka qeyb galaya Xafladda caleema saarka Madaxweynaha dowlad goboleedyadda Jubbaland ayaa sheegay in Dowladda Kenya iyo Jubbaland uu ka dhaxeeyo xiriir gaar ah.
Waxaa uu sheegay in dowladda Kenya iyo Jubbaland ay ka wada shaqeeyaan Ammaanka Xadka ay wadaaggaan labada dhinac, ayna Jubbaland muhiim u tahay ammaanka guud ee Kenya.
Xildhibaanka ayaa sidoo kale xusay in dowladda Kenya ay hambalyo u dirayso Madaxweynaha dowlad goboleedyada Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe oo si wanaagsan uga shaqeeyay Ammaanka Xadka Jubbaland iyo Kenya.
”Jubbaland iyo dowladda Kenya waxaa ka dhaxeeya xiriir wanaagsan oo aad u wanaagsan oo ku aadan wada shaqeynta dhanka Ammaanka, waxaana hambalyo u diraynaa Madaxweynaha Jubbaland” ayuu yiri Aadan Barre Ducaalle.
“Danta Kenya waa mid amni, danteena Jubalanda waa mid Kenya, sababtoo ah amniga Jubaland ayaa ku xiran amniga Kenya.” ayuu yiri Aadan Ducaale.
Waxa uu sidoo kale sheegay inay qalad tahay in ciidamada Kenya kaliya farta lagu godo, ayada oo Soomaaliya ay joogaan ciidamo kale oo Afrikan ah.
“Annaga wax dan ah kama lahin Soomaaliya, marka laga reebo inay noqoto meel amni ah oo horumarsan. Soomaaliya waxaa jooga ciidamo badan oo Afrikan ah, maxaa kuwa Kenya kaliya farta loogu fiiqaa, naga daaya cunsuriyeynta.” ayuu yiiri Aadan Barre.
Arab Guy abusing Communities near Berbera
Want to see what 21st century colonization looks like? Look no further than the heart of Somalia